प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे के भन्छन् ग्राण्डी अस्पताल ? - Sidha News
प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे के भन्छन् ग्राण्डी अस्पताल ?
काठमाडौं। नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको लागि अस्पताल भर्ना भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाँडोमा आज राति नभए भोलिसम्ममा डिस्चार्ज हुने ग्राण्डी अस्पतालले जनाएको छ। उनको निजी चिकित्सक समेत रहेकी दिव्या सिंह शाह र अस्पतालका निर्देशक चक्रराज पाण्डेद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको उल्लेख छ।
चिसोका कारण स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि प्रधानमन्त्री ओली बिहान ९ बजे ग्राण्डी पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीलाई आइसियूमा राखेर स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो। परीक्षणको रिपोर्ट आएपछि मात्रै बालुवाटर फर्किन चिकित्सकले सुझाव दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको १२ वर्षअघि मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई चिकित्सकहरूले धेरै दौडधुप नगर्न सुझाव दिँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले दुई महिनाअघि सिंगापुरमा उपचार गराएका थिए।
त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीको शरीरमा जम्मा भएको एन्टिबडीलाई प्लाज्माफेरेसिसको माध्यमबाट नष्ट गरिएको थियो।